Gefitinib Overview Gefitinib Mechanism of action Gefitinib Use In the World Side Effects of Gefitinib Gefitinib Storage More Rearch: "Lung Cancer Killer" Gefitinib Gefitinib Overview Gefitinib bụ onye na-egbochi kinase. 4-fluorophenyl) -3-methoxy-4- [7- (6-morpholinyl) propoxy] .Gefitinib nwere ngwugwu ihe omimi C3H4ClFN22O24, ihe omumu ihe omimi nke 4 dalton ma obu ucha ocha. […]
Ebumnuche Ibrutinib ezubere iche (CAS: 936563-96-1) Ibrutinib Mechanism of Action Kedu ihe Ibrutinib na-eji maka Ibrutinib Uru / Mmetụta Kedu ka anyị kwesịrị isi na-ahụ Ibrutinib Ibrutinib Side Effects Ibrutinib Nchekwa ezubere iche Ibrutinib (CAS: 936563-96-1) Ọtụtụ ọgwụgwọ ọhụrụ n'ihi na lymphoma na-ezubere iche ọgwụ. Ezubere ọgwụ ọjọọ n'obi igbu ụdị cell na ghọọ cancer ma ọ bụ ịkwụsị n'ókè nke na-eme ka mkpụrụ ndụ cancer nwere mkpụrụ ndụ kansa ma ọ bụ […]
Ezinụlọ Racetam nke Nootropic-Coluracetam Coluracetam (BCI-540, ma ọ bụ MKC-231) bụ abụba-soluble nootropic na racetam-klas nke ogige. Coluracetam dị ike karịa racetam mbụ, Piracetam. Colitscetam ka Mitsubishi Tanabe Pharma nke Japan nabatara na 2005. Na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime usoro racetam kachasị ọhụrụ nke nootropics. The patent for Coluracetam e mesịrị resị ya BrainCells, […]
Curcumin Derivative J-147 Na-emeso AD, Mgbochi ịka nká, Nsogbu Mgbakasị Obi (UN)
阿斯劳 dere na J-147 .
Nyocha J-147 Curcumin bụ polyphenol na ihe na-arụ ọrụ nke Turmeric na Ginger.Curcumin nwere ọtụtụ uru pụtara na ịgwọ ọtụtụ ọrịa, mana n'ihi enweghị ikike ya ịgafe Ọbara-Brain Barrier (BB), enwere oke mgbochi. N'ụzọ bụ isi, J147 (CAS: 1146963-51-0) bụ ihe ntụgharị Curcumin na Cyclohexyl-Bisphenol A (CBA) nke bụ ọgwụ neurogenic na ọgwụ na-egbochi neuroprotective. […]
Nkeji 30 Iji Mara Nootropic Pramiracetam-AASraw
Gịnị Bụ Nootropic? Okwu ahụ na-ezo aka na kemịkalụ ma ọ bụ kemịkal nwere ike ịmetụta ikike ọgụgụ isi. Ha nwere ike ịbụ ihe mgbakwunye nri, ogige sịntetik, ma ọ bụ ọgwụ ọgwụ. Ihe atụ nke ọgwụ ọgwụ nootropic bụ Ritalin, ihe na-akpali akpali iji agwọ ADHD ma ọ bụ Memantine, ọgwụ maka mgbaka. Akpịrị enhancers mbo mbuli ọgụgụ isi, creativity, na […]